China SZS mebere mkpuchi ikuku esi mmiri ọkụ na-eme mmiri na-eme ka mmiri dọọ ndị na-eme mmiri na ndị na-enye ya | Ugboro abụọ Mgbaaka
SZS Fulverized Coal Steam Boiler Mmiri ọkụ ọkụ ọkụ dị mma iji chekwaa mmanụ ọkụ
SZS Ọrụ MAKA COB COR CO COALAM NA HAT WATER BOILER
1. na-elekwasị anya na ọkọnọ nke nkume igwe nri bibiri coal ịta, n'otu ọkọnọ site igwe, edu na kwụsie ike.
2. ịrụ ọrụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi; usoro dum mechiri ọrụ. akpaka na kol, lekwasị ájá, ọ dịghị ájá na-agba ọsọ.
3. igbe mmiri na-ebido na nkwụsị dị mfe: a ga-amata usoro esi esi mmiri ọkụ nke ahụ bụ imeghe ma ọ bụ kwụsị. Sekọnd iri atọ iji bepụ ebe mgbanye ọkụ ahụ na arụ ọrụ nkịtị; belata nsonye ọkụ ga-enweta site na ịkwụsị ite ahụ.
4. ọkwa nke nlekota na njikwa dịtụ elu: nlele na akpaka na imeziwanye ihe ọrụ, yabụ na sistemụ ahụ nọ n'ọnọdụ kacha mma; ka ọ dị ugbu a, ọ bekwara ike ọrụ na ike ọrụ ya na mmetụta nke ihe mmadụ na arụ ọrụ nke igwe oku.
5. arụmọrụ dị elu na ịchekwa ike: njụkọta nke ikuku a na - eme ka ikuku na - ebugharị ọkụ dị mma, ikuku na - arụkọ ọrụ ọnụ pere mpe, arụmọrụ okpomoku dị elu, ma nwee akụrụngwa nke ike igwe nwere ngwa ntụgharị, ike nchekwa. mmetụta doro anya.
6. Adopts elu carbon carbon combustion dị elu, na-enwe ike imezu ihe ndị dị gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: Autoclave na esi mmiri
Osote: SHF Coal Water slury Steam ji esi mmiri ọkụ